Warshad Neefta Neefsata oo tayo sare leh iyo soosaarayaasha | Sanxin
Waxaa badanaa loo isticmaalaa bukaan-socodka bukaan-socodka, shaybaarka, qolka qalliinka iyo jawiga kale ee caafimaad ee dalbanaya, oo leh qayb nabadgelyo oo aad u sarreysa iyo iska caabin adag oo bakteeriyada iyo fayrasyada ah.
Waxyaalaha maaskarada wajiga ee Neefsashada KN95:
1.Nosel naqshadeynta qolofta, oo lagu daro qaabka dabiiciga ah ee wajiga
Naqshadeynta koobka qaabaysan ee miisaanka culus
3. Dhegaha-dabacsan oo dabacsan oo aan lahayn cadaadis dhegaha
Isticmaalka loogu talagalay:
Badeecadani waxaa loogu talagalay inay u adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka inta lagu gudajiro duullaanka
Qaab dhismeedka iyo halabuurka:
Waxay ka kooban tahay sanka, maska ​​iyo suunka maaskaro. Hawlgalka maaskarada ee lagu daboolayo qofka xidhan bisha, sanka iyo garka si toos looga ilaaliyo waxaa ka mid ah lakabka gudaha, lakabka dhexdhexaadka ah iyo lakabka kore, kaas oo lakabyada gudaha iyo dibaddaba ka samaysan yihiin maro aan tolmo lahayn iyo lakabka dhexdhexaadka ah oo ka samaysan dhalaal- dhar afuufay; suunka maaskaro ee dharka aan dunta lahayn ama laastikada; galka sanka ayaa laga sameeyay wax caag ah. ka soo horjeedka noolaha noolaha ee cudurada keena, dheecaanka jirka iyo walxaha, iwm.
Ka soo saar maaskaro xirmada, kuna xir sanka si toos ah korkiisa waxaa ka mid ah lakabka gudaha, lakabka dhexdhexaadka ah iyo lakabka kore, kaas oo lakabyada gudaha iyo dibaddaba ay ka samaysan yihiin maro aan tolmo lahayn iyo lakabka dhexdhexaadka ah oo ka samaysan dhar dhalaalaya ; suunka maaskaro ee dharka aan dunta lahayn ama laastikada; galka sanka ayaa laga sameeyay wax caag ah.
iyo dhinaca midabka madow oo dibedda ah. Ku hagaaji qalliinka sanka labada gacmood buundada sanka, si tartiib ahna gudaha uga riix bartamaha ilaa labada dhinac.
1. Badeecada nadiifka ah waxaa nadiifiyay EO waxaana la siiyaa nadiif. 2.Fadlan hubi xirmada aasaasiga ah kahor intaadan isticmaalin. Ha u isticmaalin haddii xirmada aasaasiga ah ay waxyeello leedahay ama ay ku jiraan waxyaabo shisheeye.
3. Badeecada waa in sida ugu dhaqsaha badan loo adeegsadaa ka dib marka la xirxiro.
4. Badeecada ayaa loogu talagalay hal adeeg oo waa la baabi'in doonaa isticmaalka ka dib.
Shayga waa in lagu kaydiyaa gaas aan nadiif ahayn, hawo wanaagsan oo nadiif ah
Hore: Xidhmada kateetarka xididka dhexe
Xiga: Qalabka qaboojiye ee xalka wadnaha ee qabow ee loogu talagalay isticmaalka keliya
Nooca nabdoon ee cadaadiska wanaagsan ee tuubada IV
Sirinjiyada nadiifka ah ee hal mar loo isticmaalo